Caalamka oo Soomaaliya ku bixinaya $11m - BBC Somali
Caalamka oo Soomaaliya ku bixinaya $11m
21 Maajo 2012
Lahaanshaha sawirka Matt Baugh
Image caption Danjire Matt Baugh
Magaalada Addis Ababa waxaa ku shirsan madaxda Soomaalida, gaar ahaan saxiixayaasha dhabbaha lagu gaarayo kala guur siyaasadeed.
Waxaa shirkani ku soo beegmay iyada oo maalmahan la isla dhex marayay in ay jirto dhibaato ka taagan xagga lacagta lagu socodsiin lahaa hawlaha.
Haddaba maanta ayaa waxaa soo baxday in beesha caalamku ay diyaar la tahay lacag hawsha lagu socodsiiyo.
Hadalkan wuxuu ku soo baxay si yar oo fudud. Dajnitaha Britain u qaabbilsan Soomaaliya, Matt Baugh oo weli fadhigiisu yahay Nairobi ayaa waxaa uu soo saaray qoraal uu ku qoray Bolggiisa.
Waxaa uu shaaca ka qaaday in haddii madaxda Soomaalidu ay ku dhaqaaqaan tallaabada saxda ah, in markaas ay beesha caalamku la garab taagnaan doonto lacag lagu socodsiiyo hawlaha.
Waxay beesha caalamku la diyaar tahay ayuu yiri $11m, taas oo in ka badan milyan iyo bar ay bixineyso dowladda Britain.
Haddaba su'aashu waxay tahay waa maxay tallaabada saxda ah.
Marka hore waxaa looga baahan yahay, ayuu ku tilmaamay, in madaxda ay hannaanka ka dhigaan mid aan mugdi ku jirin lagana qeyb geliyo wakiillo ka socda dhinacyada oo dhan.
Iyo in lagu shaqeeyo madbi'yan heshiiskii Roadmapka iyo heshiisyadii garowe ee daba yaallay.
Sida aan ka warqabno, saxiixayaashu waxay isku khilaafsan yihiin arrimo la xiriira dasturka, iyada oo isla markaana ay beelaha dhinacyada qaarkood ay dhaliilo u soo jeediyeen qodobba ka mid ah Dastuurka.
Danjire Matt Baugh, wuxuu ku tilmaamay in haddii khilaafaadkaas la iska af garto, oo hore loo dhaqaaqo, ay noqon doonto fursad taariikhi ah oo dhidibbada loogu aasi karo nabad iyo xasillooni ka islaaxda Soomaaliya.